Ndingayimisa njani i-pacifier yam kumntwana wam?
Lahla i-pacifier | Umntwana osemncinci
Ulawulo luququzelela ngokukhawuleza
I-Easter bunny, iSanta Claus kunye nokunyanzelisa ifeythi ngesenzo
Iintsana kunye nabancinci abakwazi ukucingelwa ngaphandle kwe-pacifier, kuba baninzi okanye bangaphantsi kwezinto abazithandayo kunye nabazali bayonwabile xa kubakho amaxesha athile ekuphumleni. Nangona kunjalo, abazali abaninzi baziva bekhuselekile xa babhekana nexesha elifanelekileyo lokulahla i-pacifier yabo.
Ezinye iingcali zithi umntwana kufuneka anqunywe kwi-pacifier ngaphambi komnyaka wesibini wobomi.
Isizathu salo kukuba ukusetyenziswa ngokusisigxina kwe-pacifier kuyingozi ukuba ukuhlaselwa kwamazinyo okanye umhlathi kuvela kumntwana.
Nangona kunjalo, le ngxelo-jikelele ayikwazi ukusetyenziswa kuwo wonke umntwana omnye, njengoko ukuveliswa komntwana osemntwini kuqhubela phambili kumazinga ahlukeneyo.
Kwabaninzi abantwana, i-pacifier isetyenziselwa ukuqinisekiswa. Ngokukodwa ngobusuku, kufuneka ke ngokunyuka. Isizathu sokusetyenziswa kwe-pacifier ngumhlobo wengane. I-reflex yokutsala iyakhumbuza ukusondeza kwifuba lomama, ebalulekileyo ekuphuhliseni umntwana. Ukuncelisa isondlo ngaphezu kokutya okunomsoco kunomsebenzi wokuthoba.
Oomama abanononkcenkcesha baya kuqinisekisa ukuba umntwana uhlala ezolile ebusuku kuphela ngesipho sesifuba. I-pacifier ingenza umsebenzi ofanayo.
Ukuba awuyi kunika umntwana i-pacifier, kunokuthi kwenzeke ukuba umntwana ukhethe enye ityhubhu esikhundleni se-pacifier.
Nangona kunjalo, ukuba umntu ukholelwa uluvo lweengcali, ngoko isonka sinomdla kodwa ke i-pacifier ikhethwayo, Izizathu zihlandlo ukuba ukutshatyalaliswa kwe-pacifier kuboniswe ukuba kushiywe kungekudala kunokuba usondle kwisithupha.
Ukuhlehliswa kwamanye amazinyo, okungabangelwa ukutshatyalala ixesha elide, kuninzi kunzulu ngetyhumbane kunokuba yi-pacifier.
Ukongezelela, unako ukufumana isipho sokunciphisa i-pacifier engcono kunesiqwenga sokuthi umntwana unako. Nangona kunjalo, kubazali abaninzi abatsha, umbuzo uhleli, indlela onokuyenza ngayo umntanakho ngokugqithiseleyo kwi-pacifier ethandekayo kwakhona?
Ngaphambi kokuba ukucoca kunokuqala kuzo zonke izithethe. Ngako oko, ungakuvumeli ukuba ube sisigxina ngokusisigxina ukususela ekuqaleni, kuba oku kuya kukwenza kube lula ukunxiba emva koko. Ukususela ekuqaleni kufuneka uhambe kuphela kwi-pacifier ngamaxesha athile afana nokulala okanye ukunika isiqiniseko.
Ukongezelela, akufanele unikeze ngokukhawuleza umntwana umntwana we-pacifier ukususela ngolunye usuku ukuya kwesinye. Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba ushiye intuthuko ngokukhawuleza, kuba ukuluma okupheleleyo kulula. Abazali mabaxelele umntwana kwaye baqinisekise ukuba kunokuba yinto enhle ukuba yintombazana enkulu okanye inkwenkwana enkulu kwaye ngokuqinisekileyo awuyidingi i-pacifier.
Ukuze kube lula kubantwana ukuba baphumule, ungasebenzisa izixhobo ezahlukeneyo. Enye into kukuba, umzekelo, ukufumana incwadi yabantwana kwesi sihloko. Kukhethwa ukhetho olukhulu kakhulu lweencwadi zezifundo ezinokudibanisa, umzekelo, isifundo somntwana wesibini, umntakwabo okanye umbane.
Abantwana abaninzi banqumla kula mabali kwaye bafuna ukuphinda bahlaziye ngokuphindaphindiweyo. I-Conny ayifuni i-pacifier kwakhona, ngoko uhlala uhlakulela imfuneko yokuyeka ukufunwa kwe-pacifier kunye nokuncoma kulula.
Umntwana unokuqonda ukuba kungengqiqo ukusebenzisa i-pacifier rhoqo.
Enye indlela enhle yokwenza kube lula kumntwana ukuba athethe ukuhlaziya i-pacifier kukubhiyozela ukuhamba kakuhle ukuze kucaca kumntwana ukuba icandelo liya kufikelela ekupheleni.
Ngokufana nokulahlekelwa kwezinyo, ungasebenzisa i-pacifier fairy njengesihambelanayo kwinkqubo efana nokuhanjiswa kwe-pacifier.
I-fairy ke idibanisa i-pacifier, ebeka phantsi komlambo, ukwenzela umnikelo. Enye inxaxheba kukubandakanya i-Easter Bunny okanye uKristu Child ekunikezeni i-pacifier. I-Easter bunny yatshintsha i-pacifier ibe yinto efanelekileyo, enjenge-pacifier fairy.
Nabani na onabantwana abasesigxina sabangani okanye intsapho, banokuxubusha ukutshintshwa kwe-pacifier kwelinye elincinane lomhlaba nomntwana wakhe. Umncinci unako ukucaciswa, umzekelo, ukuba umntwana osencinane sele efuna ngokukhawuleza i-pacifier.
Njengoko abantwana banomdla wokuba bade kwaye banamava, le ngxabano isebenza kakuhle kakuhle. Mhlawumbi kunye kunye ne-pacifier fairy okanye i-Easter Bunny / Christ Child, oya kugcina kwaye ngokuqinisekileyo uyazivuma zonke ezi zinto ngokufanelekileyo. Kubalulekile nakunoma ikuphi na ukunyanzelisa umntwana wakho.
Wonke umntwana unesantya sakhe. Ngoko ungazitshutshisi ukuba uqhathanise, kodwa ngokukhawuleza unqamle umntwana wakho kwi-pacifier. Ulungiswe kakuhle, akusiyo inhlekelele kumazinyo abantwana - emva koko, sonke saphila kwi-pacifier.
I-Sunscreen for Baby & Todler ... Health ...
Heatwave-ukukhusela umntwana kunye nomntwana
Ukubhema ekukhulelwe | IMpilo kunye neNtsana
Ukunakekelwa ngumntwana kunye namazinyo umntwana
Ukunyamekelwa kwabantwana - ukunakekela iinwele ezisuka kumntwana
Ukunyamekela abantwana - ukunakekelwa ngumntwana
Ukunyamekela abantwana - ubuso bomntwana
Umbala wokubala ukukhulelwa umntwana
Ukubumba kwephepha lokuncelisa umntwana
Ukugqithisa iphepha le-stork kunye nosana